Absinthe, lelvetan, soursop, hemp: dhirtan dila kansarka - Afrikhepri Fondation
Akhrinta: 13 daqiiqo
TheAbsinthe (artemisia annua L), oo caan ku ahaa kumanaan sano ayaa loo isticmaali jiray in lagu daweeyo cudurka duumada, cilmi baarayaashuna hadda waxay ogaadeen inay burburin karto 98% unugyada kansarka sanbabada.
Warshad kasta waxaa loo tixgeliyaa inay waxyeello leedahay haddii aan aakhirka ka helno waxyaabo faa'iido u leh caafimaadkeenna. Tusaale ahaan soo qaadoAbsinthe.
Waxay ahayd 19ème qarnigii, cabbitaanka khamriga jecel ee farshaxanka, iyo Van Gogh à Verlaine, Via Émile Zola, oo ku tilmaamay dhirbaaxada uu ku caan baxay " Assommoir Waxay ku dhaarteen inay ku xad gudbeen, waxaana loo maleynayay muddo dheer thujone, mid ka mid ah maaddooyinkiisa, waxay u horseedi kartaa waalli.
Laakiin maanta, daraasaduhu waxay muujiyeen in arintu aysan sidaa ahayn, maantana waxay ku raaxeysaneysaa xoogaa guul ah. lien
Laakiin 'Absinthe wuxuu qariyaa guryaha kale, gaar ahaan kansarka daweynta.
Wax kastoo ka iman lahaa xabaalaha laga helay Mawangduiin Shiinaha, dhanka bari ee Changsha in Hunan, goobta laga raadiyey 1972, oo ay ku jiraan waxyaabo kale, liiska qoraallada oo ka welwelsan daawada Shiinaha iyo dhirta gaar ahaaneed. lien
Qoraalladani waxay ka wada hadlaan 168 ka hor xilligeenii oo aan ka soo bixin guryahaartémisinine, iskudhis kiimikaad laga soo saaraymaqnaashaha. lien
U dhow guriga, cilmi baarayaal ka socda Jaamacadda Washington Narendra P.Singh et Henry C. Lai, ayaa daabacay daraasad muujineysa in artemisinin ayaa si waxtar leh u daaweyn kara kansarka. lien
Xitaa haddii su'aasha laga doodo, raadku wali wuu u muuqdaa mid xiiso leh. lien
Ka dibna dhir kale oo badan oo daawo ah ayaa sidoo kale awood u leh inay daaweeyaan kansarka: løvetann tusaale ahaan ...
Sida lagu sheegay daraasad ay dhowaan soo saartay Jaamacadda Windsor au Canada, xididdada løvetann waxay noqon kartaa mid waxtar badan marka loo eego kiimiko.
Saamaynta cytotoxic ee soosaarida xididka løvetann dili kara ilaa 96% unugyada leetemia joogto ah ee myelomonocytic (qaabka kansarka dhiigga) saacadood 48 kaliya ka dib markii la soocay.
Soo helitaanka astaamaha dhirtaani waxay ku dhowdahay arrin fursad ah: Dhakhtarka Caroline Hamm, Dhakhtarka kansarka, wuxuu ogaaday in mid ka mid ah bukaankeeda uu si joogto ah ugu cabbo shaaha xididka luuqleyda qolka sugitaanka, iyo in caafimaadkeedu soo hagaagayo ...
Waxay u furtay bayoolajiiste, Siyaram Pandey, professor at Jaamacadda Windsor au Canadaoo cilmi baaris ku samaynaya ardaydiisa.
Wuxuu baaritaan ku sameeyay dhiiga bukaanada kala duwan wuxuuna ku dhamaaday helitaanka: soosaarida xididka si aad u xul ah ayaa dishay unugyada. Unugyada caafimaadka qaba lama dilin, halka unugyada kansarka la dilay ". lien
Madadaalo haddii qofku ka fikiro macnaha oraahda " nuugo løndrion by xididka »...lien
Aan ka tagno løvetann warshad kale oo muddo sanado ah muran xoogani ka taagnaa: the hemp.
Ka soo horjeeda dhammaan khilaafaadka, hempWuxuu sidoo kale, si toos ah ula dagaalami karaa kansarka.
Runtii, haddii aan rumeyno machadka kansarka qaranka oo ka mid ah US, cannabinoids ee cannabis gacan ka geysashada ciribtirka kansarka iyadoo la dilayo unugyada jirka ku dhaawacmay, iyadoo la ilaalinayo unugyada caafimaadka qaba. lien
Horey ayaa loo ogaa in cannabinoids ay "waxtar yeelan karto" iyadoo laga caawinayo, iyo waxyaabo kale, bukaanada inay u adkeystaan ​​xanuunka, ayna kiciyaan rabitaankooda, laakiin helitaankan, waxaa jira wax doodaha cusub la siinayo kuwa codsada. xakamaynta xashiishadda muddo dheer.
Aan ka tagno hemp geedAmazon, ka Graviola.
Cilmi-baarista shaybaadhku waxay muujisay in ka-soo-baxyada midhaha geedkan loo yaqaan, loo yaqaan Guanabana(soursop) waxay la dagaallami kartaa kansarka iyadoo la raacayo daaweyn dabiiciga ah oo aan u keenin lalabo, miisaan lumis ama timo lumo, halka ilaalinta habka difaaca jirka.
ka 1976, ka Guanabana runti wuxuu cadeeyay inuu yahay wakiil wax ku ool ah dhowr baaritaan shaybaar.
Daraasad ayaa lagu daabacay wargeyska alaabta dabiiciga ah Wuxuu sheegay in miro-dhadani ay dooran karaan unugyada kansarka caloosha oo leh awood ka weyn 10 oo daroogo ah chemotherapy. lien
Macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan tan lien.
Xitaa caleemaha geedka Graviola waxaa laga yaabaa inuu ka shaqeeyo kansarka, wuxuuna si gaar ah wax uga tari karaa colon, naasaha, prostate, sambabada iyo kansarka xajmiga. lien
Si dhammaystiran loo dhammaystiro waxay lagama maarmaan noqon lahayd in la xuso dhir kale oo caan ku ah astaamaha ladagaallanka kansarka sida tusaale ahaan Habeenkii madow, ka Kalluunka duurka (Cichorium intybus), iyo Sarsaparilla Glabra, daahfur ay sameeyeen saynisyahano kaJaamacadda Florida, ee Jaamacadda Kaydka Western, Oo Jaamacadda Caafimaadka ee King Georgein India. lien
Intaas kuma eka: cilmi baaris ay sameeyeen Ratna Ray, Associate Professor ee Pathology, oo uu la socdo kooxdiisa Jaamacadda Saint Louis, ayaa muujiyey ficilkii toganaa ee laga soosaaray Melon Amer, taas oo yaraynaysa koritaanka unugyada kansarka, sidoo kale joojinta koritaanka kuwa ku jira kansarka naasaha iyo qanjirka 'prostate'. lien
Had iyo jeer ku mahadsan tahay casiirka Cawska qabow, daraasad ay sameeyeenJaamacadda Colorado, ayaa la muujiyey inay xaddideyso awoodda unugyada kansarka ganaca inay ku-dheef-shiid kiimikaadka gulukoos, taasoo markaa yareyneysa ilaha tamarta ee unugyada, ka dibna u oggolaanaya iyaga in la baabi'iyo
Mid ayaa ku dari kara liistadaan dheer ee dhirta daawooyinka ka hortagga kansarka, la Duufaan cagaaran, ka alfalfa, Thekamuunta, ka nacnac kalluunka, TheArjuna, Ashwagandha, le Yamaqo, madow cohosh, Theaigremoine, ka celandine, dhirta caanka ah ee caanka ku jirta oo sidoo kale daaweysa burooyinka iyagoo isticmaalaya casiir jaale ah kuwan, le Nerprun sharraxaadda, ka Clajeux, ka Boswellia serrata, ka Cordyceps, ka shooladhafil Umbellata, ka Americana Phytolacca, kabutterbur, ka Lapacho, ka Sum, kala duwan ee ginseng Brazil, ka qalooc udgoon, dhirta u dhow, ee Dayax-wareeg ah, (warshad qallalan) le repens Serenoa, kaDufanka polypodium, la Valerian, safsaf cad, tarragon, Pastel ee dyerka, TheKorney sorrel, ka zédoaire, (noocyo kala duwan) la Dionée duulis ku duugaysa,(warshad kale oo dhoobo ah) Espinheira Santa, ka Mullaca, ka Mutamba...
Aynu ku soo gabagabeyno dhowr dhir kale oo waxtar u leh dagaalka lagula dagaalama kansarka, sida le timirta, TheGoldenseal, yamaaruggii caanaha,Echinacea, Ginger, Gotu Kola, ka burdock, TheYarrow, ka rosemary. lien
Laakiin miyaanay ahayn inaan marka hore la dagaallanno kor-u-kaca, si looga fogaado in laga dhaxlo cudurkan xun, oo sannad walba mas'uul ka ah dhimashada 150 oo qof en France ? lien
Waxaan horeyba u ognahay in wasakheynta hawada ee shucaacu uu yahay qayb ka mid ah qaybaha kansarka, leukemia, (lien), laakiin waxaan ognahay in nadiifiyeyaasheenna ay yihiin kuwa halista ah ee u keeni kara xasaasiyad, xitaa xitaa kansarrada.
Runtii, haddii aan rumeyno dib u eegista " Macaamiisha 60 Milyan », Qaar ka mid ah saabuunaha ay ku jiraan kiimikada iyo sunta sunta ee beerka.
Noocyada dharka dharka 12on 14 ayaa tijaabiyey, ayaa lagu helay dambi ah inay isticmaaleen kiimiko khatar ah, hadday dammaanad qaadaanna funaanado aan dheeh lahayn, dheeh " Rhodamine B "In ay ka kooban yihiin ayaa looga shakisan yahay inay yihiin" laga yaabo in uu xajin karo kansarka ".
oo keliya Noocyada 2, Ecover et Rainett, ayaa laga heley raalli ka ah indhaha kuwa imtixaanka joornaalka. lien
Nasiib darrose, ma jiraan oo keliya saabuunta wax lagu nadiifiyo oo halisteeda leh, haddana sida ku cad isla majaladda, waxaa jira in ka badan Waxyaabaha 100 nolol maalmeedka khatarta ah.
Cuntada, waxyaabaha la isku qurxiyo, iyada oo loo marayo saabuunta dharka lagu dhaqo, kuwa baaritaanka ay baareen, ma aysan siin natiijo aad u dhiirigalin leh. lien
Si aad ugu soo noqotid awoodda nukliyeerka, inta ay macquul tahay in la sameeyo iyada oo aan la isticmaalin saabuunta wax lagu nadiifiyo iyo alaabada kale ee macaamiisha ee halista ah, way sii adkaaneysaa in laga fogaado wasakheynta shucaaca.
Waan ognahay maanta Fukushima gudbeybadda, waxaana laga helaa xeebta Mareykanka, laakiin sidoo kale hadda waxaa laga helaa biyaha tuubada ee macaamiisha Tokyo : kororka faddarada shucaaca ee biyaha cabitaanka ayaa la qiyaasay 24%. lien
Siduu saaxiibkaygii hore ee Afrika yidhi: " way fududahay in laga hortago cudurka inta laysku dayo in la daaweeyo ".
Pär cabitaanka dabka
Kiniiniyada Graviola 120 x 2000mg laga soosaaray miraha 4: 1 vegan, wax soo saar tayo leh oo laga keenay MoriVeda ...
Iibso € 15,40
Markii ugu dambeysay ee la cusbooneysiiyay May 17, 2021 2:31 pm
Daawo Butler (2013)
Waa maxay Noocyada Madadaalada ah (Qeybta 3)